Madax Weeynaha Dalka Somalia ayaa dib ugu soo laabtay wadanka - Wargeyska Faafiye
Madax Weeynaha Dalka Somalia ayaa dib ugu soo laabtay wadanka
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay, kadib markii uu soo dhameysatay safar shaqo oo uu ku tegay dalka Mareykanka.
Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde, kusoo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamanka, R/wasaaraha , wasiirro, xildhibaanno, saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida, mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo dadweyne farabadan.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka XDS qeybta salaan sharafta, wuxuuna madaxweyne Xasan Sheekh ka warbixiyay safarkii u ku tegay New-york iyo kulamadii kala duwanaa ee uu halkaasi uga qeybgalay.
Madaxweynaha ayaa magaalada New-York uga soo qeybgalay shirka 69-aad ee golaha guud ee Qaramada Midoobay, kaas oo sanadkiiba mar la qabto.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDhageyso: Hogaanka Al-Shabaab Godane Oo Baaq Ujeediyay Shacabka Soomaalida.Shabaab: "Afgooye wali waan joognaa"DF oo Shabaab wada hadal la galaysa.Dad laga raray guryaha dowladda MuqdishoFaahfaahin: Ismiidaamintii Afgooye